Showing 71-80 of 109 items.
भण्टावारी । घुस लिदै गरेको अवस्थामा सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाबाट असई पदम कटुवाललाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको छ । भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका प्रहरी चौकीका इन्चार्ज असई कट
प्रकाशित मितिः असार ८, २०७६
झुम्काका फेन्सि पसलमा चोरी
सुनसरी । झुम्का बजारमा गए राति दुई ठुला पसलमा चोरी भएको छ । रामधुनी वडा नं. ५ स्थित झुम्का प्रहरी बिट छेउमै रहेको बजरंग फेन्सि पसल,आर्यन कलेक्सन र ओक्स कलेक्सनमा लाखौ बराबरको रेडिमेट कपडा आईटमहरु चोरी
प्रकाशित मितिः असार ३, २०७६
506 पटक पढिएको
महिला बेच्न भारततिर लैजादैँ गर्दा बिराटचौककी एक महिला पक्राउ, २ जनाको उद्धार
भण्टाबारी ।सुनसरीको भण्टाबारी नाका हुँदै भारतमा बेचिन लागेका २ जना महिलाको उद्धार गरिएको छ । घरको काममा लगाइदिन्छु भन्दै भारतको दिल्लीमा बेच्न लाँदै गरेको अवस्थामा भारतीय एसएसबीको सहयोगमा सीमा सशस्त्र
7186 पटक पढिएको
मोदीको नयाँ नियम, नेपालीले प्लेन चढ्न नपाउने !
काठमाडौं । तीर्थाटन, व्यापारलगायत प्रयोजनले भारत आएर शुक्रबार स्वदेश फर्किदै ११ नेपालीलाई नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलले उड्न रोक लगाएको छ । तीमध्ये एक जना नेपाल वायुसेवा
प्रकाशित मितिः जेठ २८, २०७६
सलकपुरमा प्रदेशकै ठूलोे नर्सरी
सुन्दरहरैंचा । मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका स्थित सलकपुरमा रहेको सव–डिभिजन वन नर्सरीलाई प्रदेश १ कै सबै भन्दा ठूलो क्षमताको नर्सरीको रूपमा स्तरोन्नति गरिएको छ । लाख ५० हजार विरूवा उत्पादन गर्न
मेयर देवकुमार नेपाली भन्छन्, ‘दमाईको छोरालाई नमस्कार गर्न गाह्रो मान्छन्’
प्रेम सुनार बुर्तिबाङ्ग । ‘म यही वुर्तिबाङ्गमा जन्मेको दमाईको छोरा हुँ । मेरा बाबुले कपडा सिलाएर हामीलाई हुर्काउनु भएको हो,’ बाग्लुङ्गको ढोरपाटन नगरपालिक
प्रकाशित मितिः जेठ २२, २०७६
नेपालै हल्लाउने एउटा शंका, आधार भेटिएन चौकी कब्जाको !
काठमाडौं । सोलखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीबाट २५ कोस टाढा पर्छ महाकुलुङ गाउँपालिका । उक्त गाउँपालिका सोमबार दिनभर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा परिरह्यो । सञ्चारमाध्यमका लागि त्यो ठाउँ दिनभर चासो
प्रकाशित मितिः जेठ २१, २०७६
संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा नीति तयार पारेको छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने किटान गरेको छ । तर प्रस्ता
प्रकाशित मितिः जेठ १९, २०७६
नेकपामा रस्साकस्सी, दाहाललाई पोख्रेलको चुनौती ,
राष्ट्रिय तथा दैनिक पत्रपत्रिकाले नेकपा भित्रको विवाद तथा दाहालको पछिलो भनाईप्रति समाचार प्रकासन गरेकोछ । आज प्रकासन भएको नागरीक दैनिकले पूर्व प्रधानमन्त्रि तथा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले दाहाल र प्रधा
प्रेमिकाको हत्या गर्ने प्रेमिलाई आजीवन जन्मकैद,
विराटनगर । मोरङको ग्रामथान–३ सिद्रहामा गत भदौ १ गते विभत्स तरिकाले हत्या गरिएकी विराटनगर–१३ की २२ वर्षीया शिखा घिमिरेको हत्या गर्ने दिनेश भट्टराईलाई अदालतले आजीवन जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।
प्रकाशित मितिः जेठ १७, २०७६